Tao ihany koa ny fanomezana tsato-by ho an’ny baolina kitra sy ny hand-ball. Tsy nohadinoin’ny minisitra Tinoka Roberto ihany koa ireo mpianatra tsirairay ao amin’ity Academie ity ka notolorana fanamiana mitovy (survêtement sy T-shirt) avy. Nijery ifotony ny fanavaozana natao ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Malagasy sy ireo mpiara-miasa aminy omaly talata 9 aprily 2019 ary nitokana ny “salle de musculation « RANITSE » izay misy karazana fitaovam-panatanjahantena ari-fomba sy tena raitra tokoa sy ny « CYBER-ETUDE EMERGENCE » izay manana tanjaka internet ambony natokana ho an’ireo mpiofana ao amin’ny ANS. Fiaraha-miasa amin’i Korea Atsimo avy amin’ny tetikasa K POP no nahazoana nanatanteraka an’ireo. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Ambasadaoron’ny Korea Atsimo SEM Lim Sang-Woo izay nisaotra manokana ny fitondrana Malagasy nanaiky ny hanatanterahana ny tetikasa sy ireo solontenam-panjakana maro samihafa ary ireo filohana federasiona fanatanjahantena maromaro misy eto Madagasikara. Namaly ny hetahetan’ireo mpianatra tokoa izao fanavaozana sy fanomezana teny amin’ny ANS izao, araka ny teny nambaran’ny solontenany, ka nisaotra sy nankasitraka ny fitondram-panjakana izy ireo.